चरित्र प्रोफाइल - निकोलस ब्राउन - पालना दृश्य
GANGSTA GANGSTA अक्षरहरू
by फ्रेंकी 21st नोभेम्बर 2020 9th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड चरित्र प्रोफाइलमा - निकोलस ब्राउन
अवलोकन - चरित्र प्रोफाइल निकोलस ब्राउन
निकोलस ब्राउन हाम्रो एनीमे गंग्स्टा (GANGSTA) मा तीन मुख्य पात्रहरूको त्रिकमा हो र कहिलेकाँही "निक" को रूपमा चिनिन्छ। Gangsta anime (GANGSTA।) मा निक एक Twightlight वा TAG हो र यसको नतिजामा विशेष क्षमताहरू हुन्छ जसले उसलाई शरीरको क्षमता अधिकतम बनाउन अनुमति दिन्छ जस्तै झगडा, समग्र आन्दोलन, दर्शन र उपचार इत्यादिमा। सामान्यतया "ट्वाइटलाइट युद्ध" को कारणले घृणामा आधारित आक्रमणको लक्ष्य हो जुन हालको श्रृंखलाका घटनाहरू केही समय अघि भएको थियो।
स्वरूप र आभा - चरित्र प्रोफाइल निकोलस ब्राउन
निकोलस अग्लो छ, वारिक जत्तिकै उचाईको बारेमा, उसको तुलनात्मक रूपमा छोटो गाढा जन्मिने वा कालो कपाल छ, जुन तपाईंले तर्क गर्न सक्नुहुन्छ सफा फेसनमा स्टाइल गरिएको छ, विपरित वारिक, जो उसको टाउको पछाडि बाँधिएको छ। उसको अनुहारको अनुहारको अनुहार र माथिल्लो भाग छ र एशियाई सभ्यता सम्भवतः जापानी हो। उसले सामान्यतया कालो ज्याकेट र कालो पतलिका साथै कालो स्मार्ट जुत्ता समावेश भएको सूट लगाउँदछ। तल उसको खैरो वा कालो शर्ट लगाइएको छ र टाई पनि छैन। उसको आँखा मृतकको रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ, कुनै जीवन नै छोड्ने, वास्तवमा उसको सम्पूर्ण चरित्रले यो विशेषता प्रदर्शन गर्दछ जुन मेरो विचारमा हेर्दा डरको अनुभूति दिन्छ।
बहिरो भएकोले, उसले कमै कुरा गर्छन, यसले अनौंठो र रहस्यमय भावना दिन्छ, जसले उसको चरित्रलाई केही आकर्षक र रमाईलो बनाउँछ। निकोलसको बहिरा विशेषताले वास्तवमा एकको परिभाषा गरिरहेको छ र यो स्पष्ट रूपमा उसको चरित्र र गANG्गस्टाको पहिलो श्रृंखलामा भएका घटनाहरूमा प्रभावकारी थियो। यो एक समस्या हो जुन उसले पार गर्छ तर यसले उसको लड्न सक्ने क्षमतालाई अवरोध पुर्‍याउँदैन जहाँसम्म हामी एनीमेमा देख्न सक्छौं।
व्यक्तित्व - चरित्र प्रोफाइल निकोलस ब्राउन
व्यक्तित्वको हिसाबले त्यहाँ जानको लागि धेरै कुरा छैन जब यो निकको कुरा आउँछ, यो धेरै कठिन छ कि उसले काम गर्ने कुनै खास तरिकालाई औंल्याउन। यसले यो सेक्सनमा तत्वहरू थप्न गाह्रो बनाउँदछ, तर मैले भेला गरेको भन्दा निकोलस वारिक भन्दा बिलकुलै फरक देखिन्छ र सामान्य कुराकानीमा सामेल हुँदैन, केवल जब उसले आवश्यक परेमा। एलेक्सले निकसँग कुराकानी गर्न कोशिस गर्ने दृश्यहरू लिनुहोस्, त्यसो गर्न क्रममा धेरै हात चिन्ह चालहरू पूरा गर्दा, त्यो दृश्य सम्झनुहुन्छ? ठिक छ यदि तपाईं उनलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नुहुन्छ, वा जब उनले आफ्नो कोट समातेर उसको ध्यान खिच्न प्रयास गर्दछ र उसले उही चीज गर्छ, यहाँ एउटा नमूना छ। उसको चासो छैन जस्तो देखिन्छ तर मैले झुठ्ठो कुरा गरेको छु यदि उसले भन्यो कि ऊ यी चीजहरूको ख्याल राख्दैन।
एलेक्सले कुनै किसिमको आतंकको आक्रमण भोगेको दृश्य जुन उनलाई औषधि लिनु आवश्यक पर्‍यो वा विपरित एकदम चाखलाग्दो थियो, यसले उनीहरुसंग कुनै किसिमको अनुकम्पा दर्शाउँछ कि उनी उनीसँगको समस्याको सम्बन्धमा थिए र उनी आफैले औषधि सेलेबेर आफैंमा लिनु पर्ने थियो। आफ्नो जीवन धान्न। आशा छ कि एलेक्स र निक बीच यो तत्व मा विस्तार हुनेछ सिजन 2, तर हामीले केवल मेरो अनुमानको लागि पर्खनु पर्नेछ।
ईतिहास - चरित्र प्रोफाइल निकोलस ब्राउन
निकोलसको इतिहाससँग मिल्दोजुल्दो छ वारिक ती दुबै किशोरावस्थाको उमेरदेखि सँगै हुर्किए। वारिक निकोलसको ठेक्का धारकको रूपमा काम गर्दछ र त्यसैले उनले वारिकको आदेशहरू प्रत्येक चोटि विफलता पालना गर्नु पर्ने हुन्छ। निकोलस एक गोधूलि पैदा भएको थियो, त्यसैले उनी अझै एक गोधूलि छ जब उनी संग परिचय भयो वारिक जब ऊ पनि एक किशोर छ। जब उनीहरू यस समयमा ठूलो हुन्छन् निकोलस वारिकको शरीर रक्षकको रूपमा काम गर्दछन् र उनको सुरक्षा गर्नुपर्दछ वारिक उसको ठेकेदार हो। हामी यो पछि के हुन्छ हेर्न कोशिस गर्दैनौं र केवल किशोरावस्थामा तिनीहरूलाई प्राप्त गर्दछौं। निकोलसका अभिभावक मरिसकेका छन् र हामी तिनीहरूलाई एनिमेमा देख्दैनौं।
पछिल्ला वर्षहरु र हामी anime मा वर्तमान दृश्यहरु मा के हेर्छ कसरी छ निकोलस र वारिक अहिले र उनीहरू के गर्दैछन्। यो पनि जब तिनीहरू भेट्न मा सम्बन्ध एलेक्स। पछिका वर्षहरू अब हामी कहाँ छौं anime श्रृंखला र हामी हाम्रो तीनै जनालाई भेट्छौं मुख्य पात्रहरु। यो पछि उसले सेवा गर्दछ वारिक उहाँ जे भए पनि गर्नुभयो र आफ्नो शरीर गार्ड हुन मा बोक्ने तर दुई अधिक सँगै काम गर्न देखिन्छ र तिनीहरू अधिक बराबर देखा पर्छ। निकोलस बहिरा भएकोले, वारिक र निकोलस सांकेतिक भाषा एक अर्कोसँग कुराकानी गर्न को लागी, सँगै एलेक्स पछि उनले यो निकोलससँग पनि कुरा गर्न सकिन।
हामी एनिमेमा निकोलसको धेरैजसो ईतिहास देख्छौं र यसको परिणामको रूपमा हामी केही रोचक झगडा र अन्य दृश्यहरू देख्छौं। आशा छ कि हामी यसमा अरू धेरै पाउनेछौं सीजन 2, तर अब हामी प्रतीक्षा गर्न को लागी हुनेछ। पहिलो सिजनको अन्त्यमा हामी निकोलस आकाशमा हेर्छौं जब वर्षा भइरहेको छ र आफैलाई सोच्नुहोस्:
"यस्तो राम्रो वर्षा कहिले हुने छैन।" कहिल्यै छैन। "
यो स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित छ वारिक एकै समयमा घाइते भएको छ। यद्यपि यो खुलासा भएको छ कि वर्तमान एनिमेको अन्तिम एपिसोडमा जब यो हुन्छ, निकोलस अनभिज्ञ छ कि यो यस्तो भएको हो कि यो एक विशाल चट्टान ह्याn्गरमा छोडियो। विल्छ निकोलस र वारिक कहिले छुरी पछाडि पुनर्मिलन हुन्छ? आशा छ हामी सिजन २ को देख्नेछौं एनिमे, यद्यपि तपाईं स्पष्ट रूपमा अगाडि पढ्न सक्नुहुन्छ GANGSTA। मa्गा
चरित्र आर्क | चरित्र प्रोफाइल - निकोलस ब्राउन
धेरै मन पर्छ एलेक्स र वारिक GANGSTA मा। anime श्रृंखला निकोलससँग हामीसँग धेरै जसो आर्क हामी अवलोकन गर्न सक्छौं धेरै त्यहाँ छैन किनकि त्यहाँ केवल एक सीजन रहेको छ। हामी के देख्छौं जहाँ त्यो पहिलेको फ्याक्सब्याकमा छ जब ऊ किशोरावस्थामा अभिनय गर्दै छ वारिकको उहाँ अब एक वयस्क को रूपमा छ जहाँ शरीर गार्ड। तथ्य यो हो कि निकोलस हालको एनिमेमा धेरै परिवर्तन गर्दैनन् उसले कसरी अभिनय गर्छ वा उसको चरित्र कसरी प्रगति गर्छ, त्यो देखिन्छ कि उस्तै नै रहन्छ।
यद्यपि यो कसरी हो यसमा एनिमे, म निश्चित छु म sure्गामा यो फरक कथा हो। मलाई लाग्छ यदि एनिमेसनले दोस्रो सत्र प्राप्त गरे हामीले निकोलस चापको प्रगति देख्न सक्दछौं, तर अहिलेको लागि हामीले कुर्नु पर्छ र हेर्नुपर्नेछ। हुनसक्छ निकोलसको चरित्रको लागि परिवर्तन राम्रो हुन सक्छ, वा हुन सक्छ कि त्यो उस्तै रहोस्, जुनसुकै बाटोमा हामीले पर्खनु पर्दछ। सीजन2बाहिर आउँछ, यदि त्यो कहिल्यै हुन्छ भने। उसको चापमा परिवर्तन आयो भने उसले बहिरोपन समस्यासँग केहि गर्न सक्दछ, यसले उसको चापमा पनि भूमिका खेल्न सक्छ, हामीले हेर्नुपर्नेछ।
GANGSTA मा चरित्र महत्व। | चरित्र प्रोफाइल - निकोलस ब्राउन
निकोलसले यसमा ठूलो भूमिका खेल्छ GANGSTA कथा र एक हो तीन मुख्य पात्रहरूसहित एलेक्स, वारिक र आफैं। निकोलस बिना पूरै गतिशील बीचमा तीन मुख्य पात्रहरू केवल काम गर्दैन। निकोलसको बहिरो गुणले उसलाई धेरै अनौंठो बनाउँदछ anime श्रृंखला र उहाँविना श्रृंखला यो कार्य गर्दछ जुन सक्षम गर्दछ र यो कार्य गर्दछ श्रृंखला समग्रले काम गर्दैन।
त्यसकारण तपाईं निकोलस कती महत्वपूर्ण छ देख्न सक्नुहुन्छ GANGSTA। र बुझ्नुहोस् कि उनी श्रृंखलामा कती महत्वपूर्ण छन्। निकोलस को रूप मा काम गर्दछ वारिकको शरीर रक्षक र उनी बिना वारिक मात्र जोखिममा पर्न सक्छ जब अर्गास्टुलममा व्यापारको बारेमा जान। निकोलस एक क्रुद्ध र प्रभावकारी लडाकू छ, बहु विपक्षीलाई लिनको लागि सक्षम छ, यसले उसलाई अर्घास्टुलममा सामना गर्ने अन्य लडाकूहरूको लागि राम्रो खेल बनाउँछ। उसलाई अरु धेरै पात्रहरु द्वारा मन परेको पनि छ एलेक्स उदाहरण को लागी, जो उहाँमा विशेष चासो लिन्छ जस्तो देखिन्छ, सा sign्केतिक भाषा पनि सिकेको जस्तो मैले भनें।
उसले जापानी शैलीको कटाना प्रयोग गर्दछ र यदि तपाई लडाईमा उसको बिरूद्ध आउनुभयो भने यो एकदमै कठिन समयको लागि हो। तरवार र उसको बहिरोपन निकोलसको धेरै राम्रो परिभाषित चरित्रको विशेषता हो, यसले निकोलसलाई हाम्रो दिमागमा सिमेन्ट गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ र हामी उसलाई बिर्सदैनौं भनेर निश्चित गर्दछ।
अघिल्लो प्रविष्टि चरित्र प्रोफाइल - वारिक अर्चेन्जेलो
अर्को प्रविष्टि आड़ू केटी - Funimations हिडन रत्न